नेकपा र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप, प्रहरीद्वारा हवाई फायर - Kantipath.com
नेकपा र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप, प्रहरीद्वारा हवाई फायर
अछाम : अछामको मेल्लेख गाउँपालिका-५ मा नेकपा र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। झडपमा परेर नेकपा निकट विद्यार्थी नेता गम्भीर साउद घाइते भएका छन्। उनलाई उपचारका लागि बयालपाटा अस्पताल लगिएको छ। मतदान कार्य सम्पन्नपश्चात भएको झडपमा परी उनी घाइते भएका हुन्। ‘मतदान सकेर मतादाता घर फर्किसकेका थिए। एकाएक दुई दलका कार्यकर्ताबीच विवाद भयो’ स्रोतले भन्यो ‘नेकपा निकटका गम्भीर साउलाई चोट लागेको छ। उहाँलाई बयालपाटा लगिएको छ।’ झडपलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रहरीले हवाईफायरसमेत गरेको छ।
फाइलम तस्विर / अहिले गणनास्थलमा आवतजावतमा समस्या भएको घटनास्थलमा रहेका नेपाल पत्रकार महासंघ अछामका अध्यक्ष खम्म खत्रिले बताए। यसबारे बुझन्खोज्दा अछाम प्रहरी प्रमुख डिएसपी जनक बहादुर शाहीको फोन उठेन। यसैबीच मेल्लेख गाउँपालिका-५ विन्देबासिनिमा भएको उपनिर्वाचनमा १३५६ मत खसेको छ। जसमध्ये भवानि आधारभूत विद्यालय निर्वाचन केन्द्रमा ४७२ मत, जनता मावि ‘क’ केन्द्रमा ४६२ मत र जनता मावि ‘ख’ केन्द्रमा ४२२ मत खसेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। उक्त वडामा १ हजार ९ सय ४ मतादाता रहेका छन्। उक्त वडामा नेकपाबाट रमेश खड्का र कांग्रेसका वीरबहादुर बोहरा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यसअघि कांग्रेसका रामबहादुर बोहरा निर्वाचित भएका थिए। उनको बडिमालिका जाने क्रममा लेक लागेर मृत्यु भएको थियो। थाहा खबर
याे पनि पढ्नुहाेस् – प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे आयो यस्तो खबर
काठमाडौं : महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल अहिले चर्चाको भीभीआईपी चहलपहलका कारण सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिती रहेको छ । नहोस् पनि कसरी देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यहाँ उपचाररत रहेका छन् भने उनलाई भेट्न दिनकै भीभीआईपीहरुको लर्को लाग्ने गरेको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी पनि पुगिसकेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न मन्त्री सांसद लगायत त दिनकै जान्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले पनि चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा आईसियुमा राखेर उपचार गरिरहेको छ । गत मंगलबार स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि प्रधानमन्त्री ओली शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए भने उनलाई एपेन्डिसाईटस भएपछि त्यसको शल्यक्रिया गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले ठोस आहार दिन थालिएको छ । साथै उनी हिँड्डुल गर्न थालेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीका निजी चिकित्सक डा.दिव्या सिंह शाहले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख भएको बताउँदै उनको फिजिकल तथा बायोकेमिकल मापदण्डहरुमा सुधार देखिएको बताएकी छन् ।
डा. शाहले भने– ‘प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यारोपण गरेको मृगौलाको काममा ह्रास आउन थालेकाले बीचमा डायलाइसिस गर्नुपरेको हो । मृगौलाले अलिअलि काम गरेको छ तर जति शतप्रतिशत काम गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको छैन । त्यसकारण पनि बीचबीचमा उहाँको डायलाइसिस गर्दै आइरहेको छौँ ।’अप्रेसन भएको समयमा अलिकति हाइपरक्याटाबोलिजम स्टेज हुने भएकोले बिरामीलाई जसरी पनि स्टेबल राख्नुपर्ने र कुनैपनि समस्या आउनुभन्दा पहिला नै चिकित्सकले समस्या आउन नदिन उपायहरु अबलम्बन चिकित्सकले गरिरहेको छ । त्यही क्रममा नै प्रधानमन्त्री ओलीको दुई पटक डायलाइसिस गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अहिले भने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्टेबल भएको रहेको आवश्यक भए मात्र डायलाइसिस गर्ने अस्पतालले बताएको छ । डा. शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको शल्यक्रियापछि रक्तश्राव हुने सम्भावना भएका कारण धेरै रक्तश्राव नहोस् भनेर प्लेटस दिइएको छ । प्लेटलेटले रक्तश्राव हुनलाई रोक्छ । कम्प्लिकेसन नहोस् भनेर उहाँलाई प्लेटलेट्स चढाइएको हो । यो उपचारकै क्रम हो । उपचारका क्रममा जुनबेला जे जरुरी पर्छ हामीले त्यही एक्सन लिन्छौ । अरु साधारण बिरामीको लागि पनि यही प्रक्रिया अपनाउने हो । डाक्टरले सबै कुरा मेन्टेन होस् भनेर गरिने उपचार प्रक्रिया हो ।
अप्रेसनको आफ्नै खतरा रहन्छ । प्रत्यारोपण गरेको बिरामीमा लक्षण केहीपछि आउँछ । जति पीडा हुनुपर्ने, ज्वरो आउनु पर्ने आउँदैन । यसका साथै संक्रमणको खतरा पनि बढी हुन्छ । किटाणु ह्वार्र फैलिन्छ । यसै कारण निकै सजिकताका साथ प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा डाक्टरहरु लागिरहेका छन् । प्रत्यारोपण गर्ने कुरामा यहाँ नेपालमा राम्रो टिम र नतिजा छ । सरकारी वा निजी जहाँ गएर पनि प्रत्यारोपण सेवाको उपचार गर्न सकिन्छ । अरुण सायमी, डा. दिव्या सिंह शाह, डा. सुवाष आचार्य, डा. रमेशराज भण्डारी, डा. विभुष श्रेष्ठ लगायतको टोलीले प्रधानमन्त्रीको उपचार गरिरहेका छन् । यी बाहेकका चिकित्सकहरु पनि उपचार टोलीमा रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अहिले दुई टोलीमा रहेका सात जना चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीको उपचार गरिरहेका छन् । क्रिटिकल टोलीको नेतृत्व डा. सुवाष आचार्यले गरेका छन् भने सर्जिकल टोलीको नेतृत्व डा. रमेशराज भण्डारीले गरेका छन् । दुईजना वरिष्ठ नर्स र अन्य नर्स पनि चौबिसै घण्टा प्रधानमन्त्रीको उपचार टोलीमा कार्यरत छन् ।
नर्सहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको रक्त परीक्षण, दिसापिसाब परीक्षण, रक्तचाप मापन, ज्वरो मापन लगायतका सबै विवरण टिपिरहेका छन् । तिनै विवरणको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री भर्ना भएपछि अस्पतालमा भीआईपीहरुको आगमन निरन्तर चलिरहेको छ भने सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ । प्रधानमन्त्री नै भर्ना भएकाले अस्पतालका कर्मचारीले यसलाई चुनौतीका रुपमा लिएका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीलाई भर्ना गरेदेखि अस्पतालका निर्देशक उत्तमकृष्ण श्रेष्ठको दैनिकी फेरिएको छ । उनी बिहान सबेरै आउँछन्, राति १० बजेसम्म अस्पतालमै बस्छन् । अस्पताल प्रशासनका अनुसार कर्मचारीलाई अत्यावश्यक नभएसम्म बिदा बस्न दिइएको छैन । यसरी प्रधानमन्त्री ओली रहेका कारण बढेको चहलपहललाई व्यवस्थित गर्न अस्पताल प्रशासनले निकै मिहेनत गरेको देखिन्छ ।प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमा भर्ना भएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न आउने भीआईपी आगन्तुकको भीड लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएपनि उनीहरुले त्यहाँ रहेका प्रधानमन्त्रीका हितैषी टोलीसँग भेटेर स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने गरेका छन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई राखिएको मनमोहन कोर्डियोलोजी एण्ड भास्कुलरथोरासि सेन्टरको सर्जिकल आईसीयूमा अन्य विरामीका कुरुवाहरु बस्न नपाएपछि उनीहरु पाँचौं तल्लामा रहेको सेमिनार हलमा बसेका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहनेहरु सिधै त्यहाँ आई स्वास्थ्य अवस्था बुझेर फर्कने गरेका छन् ।
Previous Previous post: प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे आयो यस्तो खबर
Next Next post: देशभर उपनिर्वाचन हुँदा भीमफेदी गाउँपालिकामा किन भएन चुनाव ?
सेवाग्राहीका गुनासो- ‘घरी कोठा नम्बर ३, घरी ४’
कांग्रेस पालिका अधिवेशन : काभ्रे, झापा, स्याँङ्जा र तनहुँका पालिकामा नयाँ नेतृत्व
सबै स्थायी समिति सदस्य डेढ लाख सदस्य बनाउन सक्नुहुन्छ ? म तयार छु : प्रभाकर
एमालेमा १० बुँदे कार्यान्वयन : ओलीको ‘लोप्पा’, बैठकमा नआउने तेश्रो धारको ‘घुर्की’ !
किन भएन विकास ? सुपरीवेक्षकसँग गुनासो पोख्दैछन् जनता
सरकारको निर्देशन पालना गर्न मेडिकल कलेजलाई अनेरास्ववियुकाे १५ दिने अल्टिमेटम ( विज्ञप्तिसहित)
सात दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई निर्देशन
अरुको समाचार लेख्ने पत्रकारको समाचार कसले लेखिदिने ? कोभिड-१९ काे त्रास देखाउदै पत्रकारहरु भटाभट हटाइदै
निजामति ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने, मुख्यसचिव चर्चामा
ट्याक्सी चालकलाई पहेँलो ज्याकेट अनिवार्य !
बाह्र वर्षमा राहुघाटको काम तीस प्रतिशत
उद्योग संगठन मोरङद्वारा औद्योगिक सर्वेक्षण गर्न शुरुवात
भक्तपुरका चारवटै नगरमा नेतृत्व चयन
परराष्ट्रमन्त्री र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता
चितुवाले खोरभित्र बाँधिएका २३ बाख्रा मार्‍यो
प्रतिस्थापन विधेयक खारेज गर्न गुरुङको माग
पांग्रा नखुलेको बुद्ध एयरको विमान सफलतापूर्वक अवतरण